Maitiro ekuuraya maitiro muGnu / Linux | Linux Vakapindwa muropa
Maitiro ekuuraya maitiro muGnu / Linux
Rimwe rebasa iro mushandisi weWindows anoziva zvakanyanya kupedzisa maitiro kana kuvhara application zvisingaite. Aya marudzi emashandisirwo akajairika paWindows masystem, asi zvinosuwisa, iwo haasarame kune anoshanda chete system: iripowo paGnu / Linux.
Asi, kunyangwe muGnu / Linux, iyo nzira yekugadzirisa matambudziko aya inoshanda zvakanyanya kupfuura mumashandisirwo eanoshanda. MuGnu / Linux pane mirairo mitatu ine chinangwa chekuuraya maitiro kana kugumisa kunyorera, Ivo vanonzi Kill, PKill, uye Killall.
Asi tisati tavashandisa, isu tinofanirwa kutanga taziva kana kuziva iyo PID yemaitiro. Iyo PID inhamba yekuzivisa nhamba. Iyo yakasarudzika uye haina yakawanda kupfuura imwechete maitiro, inoshanda sekunge yaive iyo DNI kana pasipoti nhamba yemunhu, chiri chinhu chakasarudzika uye chisinga dzokororwe panguva iyoyo.
Kuziva iyo PID yemaitiro kuri nyore, tinogona kuiwana nekunyora rairo "htop" mune terminal kana kunyorera zvakananga "ps -A" mune iyo terminal.
Chero zvazvingaitika, ichatiratidza maitikiro ese, zvirongwa zvavanoshandisa uye iyo PID yeese maitiro. Zvino, kuuraya maitiro isu tinofanirwa kunyora zvinotevera:
Panzvimbo pePID isu tinoshandisa kodhi yekuita. Musiyano "-9" unoratidza kuti tinoda kuuraya maitiro. Kana tikachinja kuti "-15", tinoratidza kuti tinoda kuti chirongwa ichi chipedze uye kana tikashandisa "-1" tinochimisa.
Kuuraya rairo rinotibatsira kuuraya maitiro asi zvinongoshanda pamaitiro atakagadzira semushandisi, hatizokwanise kuuraya maitiro kubva kune vamwe vashandisi kana kubva kuhurongwa.
Iyo Pkill yekuraira yakafanana neKill. Asi kusiyana neiyo yapfuura, PKill inotibvumidza kuuraya maitiro kana chirongwa tichishandisa zitandiko kuti, isu hatidi kushandisa PID yechirongwa. Muenzaniso wekushandisa ungave:
Mutemo weKillall une simba uye unoshanda kupfuura mirairo yapfuura asi zvakare zvine njodzi. Killall haingouraye maitiro chete asi zvakare chirongwa kana basa, kuuraya maitiro ese anoenderana nechirongwa ichocho. Muenzaniso wekushandisa Killall is
Kuuraya maitiro, chero yemirairo iri pamusoro inoshandiswa, asi haisi yese inoenderana zvakakwana nemamiriro edu ezvinhu. Zvichienderana nezvatinoda kana dambudziko redu tinofanirwa kushandisa Kill, PKill kana Killall. Ini pachezvangu ndinokurudzira shandisa PKill, nekuti iri nyore uye inokurumidza. Kunyangwe kana tiine dambudziko rakakomba, rairo reKillall rinogona kubatsira zvakanyanya Iwe haufunge kudaro?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Sisitimu Yekutonga » Maitiro ekuuraya maitiro muGnu / Linux
Uye kana iwe uchida kuuraya chirongwa chiri pachiratidziri, unogona kushandisa xkill.
Semuenzaniso, iwe unovhura iyo Calculator uye inonamira (usatya, ingori muenzaniso, izvo hazvife zvakaitika: D)
Saka mune rairo koni tinonyora xkill
Iyo mbeva mbeva inozoshanduka kuita mhando ye "x" uye tinodzvanya negonzo riri pane karukureta. Zvakafanana nepfuti kuuraya: D
Ini handisi connoisseur asi zviri nyore pane desktop »Mate» ine «System Monitor» kunyanya nekuti haufanire kumhanya semaneja.
NeSystem Monitor unomuuraya uye iwe unopisa kwazvo.
Pindura ku arrakix
Kana nekuda kwechimwe chikonzero chisingazivikanwe iyo skrini yakavharwa uye haugone kuwirirana, saka hazvishande kuvhura iyo system yekutarisa nekuti yakavharwa. Iwe unogona kuvhura imwe chikamu ne ctrl + alt + F1..F12 uye ipapo iwe unogona kushandisa iyo console mirairo inoratidzwa pamusoro.
Kana batanidza kuburikidza nessh kubva kune chero imwe komputa / chishandiso.
Idzi nzira dzese dzinoshanda uye dzinoshanda.
Ini pachangu ndinofarira Xkill… .Chinhu chinonyanya kukurumidza kugadzira gadziriro yemirairo iyi uye kuiisa mupaneru, iyi ndiyo nzira yandinoshandisa muXunbuntu 14.04, nzvimbo yangu yenguva dzose, kana chimwe chinhu chikabatwa.
Ndinovimba uyu mupiro unobatsira uye zadzisa ruzivo rwunopihwa mune ino posvo.
Kwaziso uye zororo rakanaka.
Iyo Ataribox chirongwa chakamiswa zviri pamutemo !!!
Iwo maapplication eLinux ausingakwanise kupotsa pamberi pekupera kwa2017